Nsọpụrụ ụbọchị: ịhụnanya maka ụka Katọlik, nne anyị na onye nkuzi anyị | EKPERE NA OZI
Oge nke ụbọchị: ịhụnanya maka Chọọchị Katọlik, nne anyị na onye nkụzi anyị
Paolo Tescione	Edere ya November 10, 2020 November 10, 2020
1. Obu nne anyi: anyi aghaghi ihu ya n’anya. Obi nro nke nne anyi nke uwa di uku nke na apughi inyeghachi ha ozo karia iji ihunanya di omimi. Mana, iji chekwaa nkpuru obi gi, gini ka Nzuko a na-eji! Site na mgbe amuru gi rue nili, kedu ihe o na emere gi site na sakramenti, ya na okwuchukwu, ya na katakisim, na mmachi, ya na ndumodu!… Uka n’eme dika nne nye nkpuru obi gi; na ị gaghị ahụ ya n'anya: ma ọ bụ nke ka njọ, ị ga-eleda ya anya?
2. O bu onye nkuzi anyi: anyi aghaghi irube isi na ya. Chee echiche na ọ bụghị nanị na Jizọs kwusara Oziọma ahụ dị ka iwu nke Ndị Kraịst ga-edebe, kamakwa ọ gwara Chọọchị, nke ndịozi ahụ nọchiri anya ya: Onye ọ bụla nke na-ege gị ntị, na-ege m ntị; onye ọ bụla jụrụ gị ajụla m (Luc. x, 16). Chọọchị, ya mere, na-enye iwu, n'aha Jizọs, mmemme oriri, obubu ọnụ, nche; gbochiri, n’aha Jisos, inwe ufodu akwukwo; na-akọwa ihe a ga-ekwere. Onye ọ bụla anaghị erubere ya isi anaghị erubere Jizọs isi.Ma ị na-erubere ya isi? ̀ na-edebe iwu na ọchịchọ ya?
3. O bu eze anyi: anyi aghaghi igbachitere ya. Ọ bụ ezie na onye agha ekwesighi iji chebe onye ọchịchị ya n'ihe egwu? Anyị bụ ndị-agha nke Jisus Kraịst, site na nkwenye; na ọ gaghị abụ n’ebe anyị nọ ịgbachitere Jisus, Ozi-ọma ya, Nzukọ-nsọ, nke ọ hibere maka ịchị mkpụrụ-obi anyị? A na-agbachitere Churchka, 1 Celsius site na ịkwanyere ya ugwu; 2 Celsius site na ịkwado ihe kpatara megide ndị na-asọ oyi; 3 ° site na ikpe ekpere maka mmeri ya. Ọ dị gị ka ị na-eme ya?
OMUME. - Pater atọ na Ave maka ndị na-akpagbu Chọọchị.
Nke gara aga Post Gara aga post:Na-atụgharị uche taa na mkpali gị maka ijere ndị ọzọ ozi n'ịhụnanya
Next Post → Post ozo:Pope Francis na-eme emume ncheta afọ 500 nke mbụ uka na Chile